उत्कृष्ट फुटबलर घोषणा आज, कसले मार्ला बाजी ? – Sajha Bisaunee
उत्कृष्ट फुटबलर घोषणा आज, कसले मार्ला बाजी ?
आज फिफाले सन् २०१६ को उत्कृष्ट फुटबलरको नाम घोषणा गर्दैछ ।
मेस्सी भने त्यसको ठीक विपरीत छन् । मैदानमा उनी सधैं शान्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । लामो समयदेखि एन्टोनेल्ला रोकुज्जोसँग प्रेमसम्बन्धमा छन् । उनीहरूका दुई नानी पनि भइसकेका छन् । मेस्सीले प्रेमिका फेरेको र नाइट क्लब धाएको समाचार सुनिएको छैन । यी दुई खेलाडीको विपरीत स्वभावले पनि समर्थकलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । रोनाल्डो र मेसीको फुटबल कलालाई मात्र हैन, मैदानभित्र र बाहिर उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने व्यवहारलाई समेत लिएर समर्थकहरू पक्षविपक्षमा लामै समय बहस गर्छन् । फेरि पनि निष्कर्ष भने आआफ्नै अडान हुने गर्छ ।
समर्थकहरूको यही बहसलाई केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ ९फिफा० ले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्डले मत्थर पार्ने गर्छ । त्यसैले फुटबलका पारखीहरू प्रत्येक अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै फिफा वर्ष खेलाडीको घोषणाको प्रतीक्षामा रहन्छन्, जुन प्रतीक्षा यो वर्ष पनि छ ।
आज फिफाले सन् २०१६ को उत्कृष्ट फुटबलरको नाम घोषणा गर्दैछ । यो वर्षबाट भने अवार्डको अगाडि ‘बेलोन्डे अर’को ट्याग झुन्डिनेछैन । फ्रान्स फुटबलसँगको सहकार्यमा सन् २०१० देखि वर्षको उत्कृष्ट फुटबलरलाई ‘फिफा बेलोन्डेअर अवार्ड’ प्रदान गर्दै आएको फिफाले यसै वर्षबाट सहकार्य तोडेको छ । त्यसैले ६ वर्षपछि फिफाले फेरि वर्षको उत्कृष्ट एक फुटबलरलाई ‘फिफा बेस्ट प्लेयर अफ दी इयर’बाट पुरस्कृत गर्दैछ ।
अवार्डका निम्ति तीन खेलाडी प्रतिस्पर्धामा छन् । यी तीनै स्ट्राइकर सन् २०१६ मा निक्कै चम्किएका खेलाडी हुन् । रमाइलो संयोग, यी तीनमध्ये मत जसको पक्षमा गए पनि विजेता स्पेनी क्लबसँगै जोडिनेछन् । पछिल्लो ६ वर्षयता फिफा बेलोन डे अर अवार्डका लागि त दुई स्पेनी क्लब रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाकै खेलाडीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदै आइरहेको छ । सन् २०१३ मा बायर्न म्युनिखबाट फ्रांक रिबेरी तथा सन् ०१४ मा बायर्नकै म्यानुअल न्युयर सर्ट लिस्टमा पर्नुबाहेक पछिल्लो ६ वर्षयता रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाकै खेलाडीमात्रै सर्ट लिस्टमा परेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २५ पुष २०७३, सोमबार १४:४५